Fisaintsainana | Izay Lazain’​ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Norvezianina Népali Oromo Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa
“Hosaintsainiko tokoa ny asanao rehetra, ary hoeritreretiko lalina ny zavatra nataonao.” —Salamo 77:12.
Misy olona manao karazana fisaintsainana misy fombafomba (lazaina hoe manao méditation). Avy amin’ny fivavahana tatsinanana no niandohan’izy io. Ahoana no ataon’ny olona amin’izany? Foanany tanteraka ny sainy, ka tsy mieritreritra na inona na inona mihitsy izy. Mamerimberina teny iray na vitsivitsy izy, na mibanjina sary. Lasa tony be, hono, izy avy eo ka milamina tsara ny sainy.
Tena mampirisika antsika hisaintsaina ny Baiboly. (1 Timoty 4:15) Tsy milaza anefa izy io hoe mila foanana ny saina, na koa hoe mila mamerimberina teny (antsoina hoe mantra). Misy hevitra mazava tsara kosa saintsainina, ohatra hoe ny toetran’Andriamanitra, ny lalàny, na ny zavatra noforoniny. Nisy mpanompon’Andriamanitra iray, ohatra, nivavaka hoe: “Misaintsaina ny zava-drehetra nataonao aho, ary ny asan’ny tananao foana no tiako hoeritreretina.” (Salamo 143:5) Hoy koa izy: “Rehefa mahatsiaro anao eo am-pandriako aho, mandritra ireo fotoam-piambenana amin’ny alina, dia misaintsaina momba anao.”—Salamo 63:6.
Inona ny soa ho azonao raha misaintsaina ianao?
Mahasoa ny misaintsaina satria mahatonga anao ho tsara toetra sy hahafehy ny fihetseham-ponao, ary mandrisika anao hanao ny tsara. Lasa misaina tsara koa ianao, sady mahay manavaka hoe inona no tokony holazaina sy tokony hatao. (Ohabolana 16:23) Mahatonga anao ho sambatra sy afa-po amin’ny fiainana izany fisaintsainana izany. Milaza ny Salamo 1:3 fa ny olona misaintsaina foana momba an’Andriamanitra dia ‘ho toy ny hazo nambolena eo amoron’ny rano mikoriana, dia hazo mamoa amin’ny fotoanany, ary tsy mba malazo ny raviny. Hahomby daholo izay ataony.’
Lasa mahay sy mahatadidy zavatra kokoa isika rehefa misaintsaina. Diniho izao: Rehefa mianatra zavaboary iray na foto-kevitra iray ao amin’ny Baiboly ianao, dia mahita hevitra maro mahaliana amin’ilay izy. Raha saintsaininao ireo hevitra ireo dia ho hitanao fa misy ifandraisany. Ho hitanao koa fa mifandray amin’izay efa fantatrao taloha izy ireo. Hazo natambatambatra, ohatra, no anaovan’ny mpandrafitra fanaka tsara tarehy. Rehefa misaintsaina koa isika dia manambatambatra hevitra ao an-tsaina, ka lasa azontsika tsara ilay izy manontolo.
Tokony hofidina ihany ve ny zavatra saintsainina?
‘Avy ao anatin’ny olona, eny, avy ao am-pony, no ivoahan’ny eritreri-dratsy, dia fijangajangana, halatra, vonoan’olona, fanitsakitsaham-bady, fitsiriritana, fanaovan-dratsy, fitaka, fitondran-tena baranahiny, maso feno fitsiriritana, ary hadalana.’ (Marka 7:21, 22) Hoatran’ny afo ihany ilay izy, ka raha tsy voafehy dia mety hampidi-doza. Mila fehezina àry ny saina! Raha zava-dratsy mantsy no eritreretina foana, dia lasa maniry hanao an’ilay izy isika, ka manatanteraka mihitsy amin’ny farany.—Jakoba 1:14, 15.
Mampirisika antsika ny Baiboly mba hisaintsaina zavatra ‘marina, zava-dehibe, mahitsy, madio, mahatehotia, tsara laza, misy hatsarana, ary mendri-piderana.’ (Filipianina 4:8, 9) Izay afafintsika ihany mantsy no jinjaintsika. Zavatra tsara àry eritreretina, dia ho lasa tsara toetra ianao, sady hahafinaritra ny teny lazainao, ka hifandray tsara amin’ny hafa ianao.—Kolosianina 4:6.
Inona no Lazain’​ny Baiboly Momba ny Fisaintsainana?